आफ्नो छोरीको अधिकार किन खोस्दै छन मधेसी नेताहरू ? — Motivate News
आफ्नो छोरीको अधिकार किन खोस्दै छन मधेसी नेताहरू ?
Posted on November 24, 2016 by motivate news
काठमाडौँ – मधेसी नेताहरुले अहिले भनिरहेका छन् अंगीकृत नागरिकहरुलाई राज्यको माथिल्लो पदमा लैजान पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । हाम्रोविरुद्ध अफवाह फैल्याउनेहरुले यसो गरिरहेका छन् । उनीहरुले यसो भन्नु मतलव ‘म शाकाहारी हुँ तर अण्डा र माछा चाहिँ खान्छु’ भने जस्तै हो । माछा र अण्डा खाएपछि कोही शाकाहारी होला त ?
अर्थात मधेसीहरुले मागेको वैवाहिक अंगीकृतलाई भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा सबै पद दिनु पर्छ भन्ने हो । वैवाहिक अंगीकृत भनेको कस्ता हुन् ? मधेसीहरुले अझ स्पष्ट रुपमा बुझ्ने गरी भन्नु पर्दा भारतमा सोनिया गान्धी जस्ता हुन् । कांग्रेस आइले चुनाव जित्दा पनि त्यही पार्टीकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्न सकिनन् ।
भारतको कानुनले उनलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको थिएन । रोक्ने मध्येका एक थिए अहिले भारतमा प्रधानमन्त्री भएका पात्र नरेन्द्र मोदी । यीनै मोदी अहिले मधेसीले अधिकार पाएनन् भन्दै नेपालको संविधानविरुद्ध विश्वभर भ्रम फैल्याउँदै हिँडेका छन् (भलै अहिले अलि रोकिए ।)
वैवाहिक अंगीकृतले १० वर्षपछि नेपालमा राष्ट्रपतिसम्म हुन पाउँने अधिकार राख्थ्यो । त्यो अन्तरिम संविधानमा पनि राखिएको थियो । २ वर्षका लागि भनेर बनाइएको त्यो संविधानमा राखिएका त्यस्ता कुरा कार्यान्वन हुनु अघि नै प्रतिस्थापन हुने अड्कलबाजीका कारण दलहरुले त्यस्तो प्रावधान राखे । अहिले त्यही गलपासो भएको छ ।
यो गलपासो हो भन्ने थाहा पाएरै प्रमुख तीनै दलले नयाँ संविधानमा हटाए । अहिले मधेसी मोर्चालाई त निहुँ खोज्नु मात्रै थियो । उसले यस्तै विषय निहुँ बनाएर आन्दोलन गर्यो । आन्दोलनमा धेरै क्षति भयो । अहिले प्रतिष्ठाकै लागि भए पनि मधेसी मोर्चाले ‘हामीले अंगीकृतको कुरा गरेका होइनौं, वैवाहिक अंगीकृतको कुरा गरेका हौं ’ भनिरहेको छ ।
वास्तवमा वैवाहिक अंगीकृतलाई चाहिँ अधिकार दिनु पर्छ भनेकै अंगीकृतलाई नागरिकता दिनु पर्छ भन्ने माग हो । कुरा घुमाइएको मात्रै हो । भारतको दार्जलिङ, असामलगायत ठाउँका नेपालीसँग पनि नेपालीहरुको विहेबारी चल्छ । तराइका मधेसी मात्रै होइनन पहाडका पहाडेहरुको पनि भारतका नेपालीसँग नातासम्बन्ध छ ।
तर निष्ठाको राजनीति र सार्वभौमिकता भनेको नातासम्बन्ध भन्दा माथि हुन्छ । हाम्रो आफन्त भारतमा छन् वा भारतबाट बिहे गरेर ल्याइएकाहरु आफन्त बन्छन् भन्दैमा यो देशमै नजन्मेकाहरुलाई वंशज सरह अधिकार दिन नहुने आवाज बलियो भएको छ । देशमै नजन्मेकाहरुलाई अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति हुन दिइन्न । महिलाको अधिकारबारे त अमेरिकीहरुलाई पनि अलिअलि थाहा त होला । भारतमा पनि थाहा होला । किन सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्न सकिनन् ?
यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के छ भने मधेसीहरुको यो मागले आफ्नै छोरीको अधिकार कुण्ठीत गर्छ । नेपालमै जन्मेकी छोरी र विदेशमा जन्मेकी बुहारीले अधिकार समान पाउने भन्ने न्यायोचित होला ? कम्तिमा नेपालमै जन्मेको हुनु पर्ने प्रावधानले छोरीको अधिकार त सुनिश्चित गर्छ ।
मानौं नेपालको राष्ट्रपति पदका लागि कुनै एक मधेसीको नेपालमै जन्मेकी छोरी र भारतमा जन्मेकी बुहारी दुवै सक्षम छन् । यो अवस्थामा पहिले अवसर कसले पाउनु पर्ला ? अवश्य पनि नेपालमा जन्मेको धर्तीपुत्रको अधिकार पहिलो हुन्छ । र हुनुपर्छ । पहिलो अधिकार नेपालमा जन्मेकी छोरीकै हुनुपर्छ ।
यसो गर्दा कसरी मधेसका तमाम वैवाहिक अंगीकृतको अधिकार खोसेको हुन्छ ?
Posted in मुख्य समाचार, समाज | Tagged Nationality, नागरिक, नागरिकता, मधेश | Leaveareply
टेण्डर दर्तामा कांग्रेसनिकट ब्यावसायी चढेको गाडीमा ढुंगामुढा प्रहार
सिन्धुपाल्चोक । मध्ये भोटेकोशी आयोजनाले आह्वान गरेको टेण्डर फर्म बुझाउने क्रममा ढुंगामुढा भएको छ । झडपपछि आयोजनाले टेण्डर दर्ता हाल स्थगन गरेको छ । बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन साउन ४ गते फर्म दर्ता गर्न जाँदा गोले निर्माण सेवाका सञ्चालक कुमार तामाङ...